मिति २०७५ जेठ ४ गते
सांसदहरुलाई संसदीय विकास कोष र पूर्वाधार विकास कोषको रकम दिने वा नदिने बारे देशमा निकै बहस चलिरहेको छ । वास्तवमा यो एउटा धेरै नै विवादको विषय बनेको छ । त्यसबारे मैले आफ्नो पार्टीको स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छु । सांसदहरुलाई संसदीय विकासको रकम दिनु पर्दछ वा दिन पर्दैन भन्ने बारे हाम्रो कुनै खास विचार छैन । त्यो रकम नदिए पनि हामीलाई कुनै खास आपत्ति छैन र त्यसबाट हाम्रो संसदीय कार्यविधिमा कुनै खास अन्तर आउने छैन । त्यो रकम दिए पनि सधै झैं अहिले पनि हामीले विकास कार्यमा र जनताको सेवामा इमान्दारितापूर्वक खर्च गर्ने छौं । त्यसबारे हाम्रो यो पनि जोड छ कि त्यो रकम सिधै सांसदले नै खर्च गर्ने गरी दिनु हु“दैन । उनीहरुलाई खालि योजनाहरुको चुनाव गर्नेसम्म अधिकार हुनुपर्दछ । खर्च गर्ने अधिकार उपभोक्ता समिति वा बेग्लै निकायलाई हुनुपर्दछ र आफ्नो जिम्माको खर्चको अवलोकन गर्ने अधिकार भने सांसदलाई हुनुपर्दछ । त्यसका साथै संसदले एउटा विशेष अनुगमन समितिको गठन गरेर संसदीय विकास कोषको खर्चको अनुगमन र लेखा समेत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
संसदीय विकास कोष वा पूर्वाधार विकास कोष बारे देशमा विवाद उठाउने र आलोचना गर्ने जुन कार्य भइरहेको छ, त्यसबारे हाम्रो पार्टीको स्थितिको विषयमा मैले केही प्रकाश हाल्न चाहन्छु । केही व्यक्तिले कुनै गल्ति गरेमा गल्ति नगर्ने व्यक्तिलाई पनि एउटै श्रेणीमा राखेर दोष दिनु न्यायसंगत कुरा होइन । त्यही कुरा संसदीय विकास र सबै पार्टीहरुको सांसदहरु बारे पनि सत्य हो ।
सांसदहरुलाई दिने कोषको दुरुपयोग हुने वा पार्टीको कार्यकर्ताहरुको लागि खर्च हुने गरेका विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु हुने गरेका छन् । त्यस प्रकारको आलोचनामा सत्यता भएको कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर हाम्रो पार्टीमा कहिल्यै पनि त्यस्तो हुने गरेको छैन । हाम्रो पार्टीका सांसदहरुमाथि कहिल्यै पनि संसद विकासको रकम हिनामिना गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने वा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेका आरोपहरु लाग्ने गरेको छैन । हाम्रो पार्टीका सांसदहरुले त्यो रकमबाट एक रुपैया“ पनि लिने वा खर्च गर्न पाउ“दैनन् । त्यस बारे हाम्रो पार्टीमा अत्यन्त कडा अनुशासन छ । संसदीय विकासको जेजति रकम आउ“छ । विकास कार्यमा नै खर्च हुन्छ । सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीमा त्यही प्रकारको परम्परा रह“दै आएको छ ।
संसदको इतिहासमा विभिन्न पार्टीका सांसदहरु कैयौं प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचारहरुमा मुछिने गरेका कैयौं उदाहरण पाइन्छन् । तर हाम्रो पार्टीको करिब ढाई दशकको इतिहासमा हाम्रो पार्टीका सांसदहरु माथि कहिल्यै त्यस प्रकारको आरोप, दाग वा कलंक लाग्ने गरेको छैन । त्यही कुरा संसदीय कोषको हिसाब बारे पनि सत्य हो । कसैले त्यसबारे निष्पक्ष छानवीन गरेमा त्यो कुरा प्रमाणित हुनेछ । त्यसरी हाम्रो पार्टीका सांसदहरुको इतिहास निष्कलंक र स्वच्छ रहने गरेको कुरा एउटा ऐतिहासिक वास्तविकता हो ।
मन्त्रीमण्डलमा जाने भनेको पैसा कमाउन जाने हो र मन्त्री भएपछि प्रसस्त पैसा कमाउ“छन् भन्ने कुरा पनि आम रुपमा भन्ने गरिन्छ, तर त्यस प्रकारको आक्षेपबाट पनि हाम्रो पार्टी अपवाद रहेको छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर के.सी. उपप्रधानमन्त्री पनि बन्नु भएको थियो । तर उहा“ले आफ्नो कार्यकालमा एक रुपैया“सम्म पनि भ्रष्टाचार नगरेको कुरा आमरुपमा थाहा छ । हाम्रो पार्टीबाट कुनै सांसद मन्त्री नबन्दासम्म हाम्रो पार्टीको कुनै मान्छे मन्त्री बनेमा उ पनि भ्रष्ट हुने छ वा बिग्रने छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर का. के.सी. मन्त्री बनेपछि त्यस प्रकारको भनाई पनि गलत सावित भयो । हाम्रो पार्टीमा भएको उच्च प्रकारको नैतिकता र अनुशासित कार्यप्रणालीका कारणले नै कुनै पनि सांसद त्यसरी विग्रने गरेका छैनन् । कसैले सामान्य प्रकारले पनि पार्टीको नियम र अनुशासनको उल्लंघन ग¥यो भने उ कडा अनुशासनको भागी हुनुपर्दछ । त्यही कारणले नै हाम्रो पार्टीका कुनै सांसदले संसदीय विकास कोषको कुनै रकम हिनामिना गर्न पाउ“दैनन् र अहिलेसम्म गरेका पनि छैनन् । त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीका सांसदहरु अन्य सबै पार्टीका सांसदहरुभन्दा बेग्लै रहेको कुरा स्पष्ट छ । तर त्यसको अर्थ खालि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुमात्र त्यस प्रकारको अनियमितता वा भ्रष्टाचारबाट बच्ने गरेका छन् भन्ने होइन । अन्य पार्टीहरुमा पनि त्यस प्रकारको आदर्श चरित्र भएका वा कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नगर्ने कैयौं सांसदहरु छन् र त्यो कुराको अन्तर नगरिकन सबैमाथि एकै प्रकारको आक्षेप लगाउनु सही हुने छैन ।